Iholide lase-Santorini Beach - Lilungele Umndeni!🏝 - I-Airbnb
Iholide lase-Santorini Beach - Lilungele Umndeni!🏝
Dolphin Coast, KZN, iNingizimu Afrika
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Liesa
U-Liesa Ungumbungazi ovelele
I-Easy Barefoot Beach Living.....
Le ndawo enentofontofo enamakamelo ama-2 yokugezela i-Beach Flat, etholakala e-Santorini, i-Beachfront Estate, esitezi esiphansi, ebheke i-Forrest esogwini enomfula ogelezayo, inikeza okungcono kakhulu kuyo yomibili imihlaba.
Jabulela Kokubili Iholide Lasobhishi NelaseBush konke ngesikhathi esisodwa.
Ukuhamba ngezinyawo okufushane okungu-1 kuzokuyisa ngqo e-Thompson's Bay Beach nase-Tidal Pool, noma ungaphumuza kuvulandi wakho futhi ujabulele impilo yezinyoni eningi, kanye nezilwane zasendle zasogwini.
I-Much Loved Family Beach Escape, leli gumbi lokulala eli-2 elinokubukwa kwe-Forrest, amagumbi okugezela angu-2 esimanje (1 aneshawa kanye ne-1 enokugeza), inohlelo oluvulekile lokuhlala. Ikhishi le-Custom Cape Vineyards Style (ikakhulukazi elithuthwa futhi lifakwe lisuka epulazini lewayini lomndeni) ligeleza lidlulele endaweni yokudlela kanye negumbi lokuphumula eliphelele elinamasofa anethezekile kanye ne-Tv enkulu ye-flat screen ene-DSTV ne-WiFi engavaliwe. Isikhala esanele semidlalo yebhodi nezindida ezinsukwini zasehlobo ezinetha.
Iminyango eshelelayo esuka egumbini lokulala elikhulu negumbi lokuphumula livulela kuvulandi elinefenisha elinendawo yokuhlala yangaphandle nendawo yokudlela, elungele ama-barbeque omndeni kuyilapho izingane ezincane zidlala ezingadini, noma izingane ezindala zingathatha uhambo olude ziye olwandle, zibhukude, i-snorkel noma i-bodyboard, noma ukushisa amandla athile ezinkundleni zethenisi.
Kulala izivakashi ezingu-4 emakamelweni okulala angu-2, kanye nesofa lokulala endaweni yokuphumula elungele izingane.
Amathawula obhishi, okugeza kanye nekhishi anikeziwe.
4.73 · 67 okushiwo abanye
Njengoba itholakala Emhubheni okhula ngokushesha eNingizimu Afrika, iNorth Coast inikeza imisebenzi yayo yonke iminyaka. Izikhungo zezitolo ezi-3 endaweni eyi-5km enikeza ulwazi oluningi lokuthenga nelokudlela.
I-Ballito iyintandokazi eqinile yabakhi bamaholide nemindeni. Ngamabhishi amaningi okuntweza, i-kitesurfing, i-bodyboarding, i-snorkeling nokudoba.
Ngihlala endaweni ngakho ngihlala ngitholakala nganoma imiphi imibuzo noma izinkathazo. Futhi ngiyajabula ukwabelana ngamathiphu endawo noma ingilazi yewayini noma ikhofi :)
ULiesa Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Dolphin Coast namaphethelo